Eo aloha: Makà fomba fijery zaraina amin'ny fifanakalozana varotra | Martech Zone
Eo aloha: Makà fomba fijery zaraina amin'ny fifanakalozana varotrao
Front no sehatra fifandraisan'ny mpanjifa izay manambatra ny mailaka, ny fampiharana ary ny mpiara-miasa amin'ny fomba tokana. Miaraka amin'ny Front, tsotra ho an'ny olona tsirairay ao amin'ny orinasanao ny misy fiatraikany amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa.
Front dia tia ny mieritreritra ny tenany ho toy ny kokpitin'ny serasera ho an'ny ekipa mpivarotra. Miaraka amin'ny fantsom-pivoarana rehetra hitan'ny ekipanao rehetra ao anaty varavarankely iray miaraka amin'ny CRM sy ny rafitra backend anao, ny Front dia manampy anao hanidy bebe kokoa, haingana kokoa, ahafahan'ny ekipa mivarotra anao:
Manamboara fikorianana mandeha ho azy miaraka amin'ny fampandrenesana manan-tsaina mba handaminana ireo fitarihana ho avy, alehany mankany amin'ilay olona marina, ary hataony ho lohalaharana ny asa fitoriana.
Miaraha miasa amin'ny serasera amin'ny fotoana tena izy ary alao sary an-tsaina ny hafatrao mahomby indrindra. Ampifanaraho haingana amin'ny paikady miaraka amin'ny sahan-kevitra feno.
Tatitra momba ny hetsika varotra sy ny fotoana famaliana hahazoana ny fomba fijery ilainao hihatsara. Manendre tompony hitantana ny vinavinany tsirairay avy hatrany amin'ny farany.
mampiditra Salesforce (na CRM rehetra) ao anaty boaty fampidiranao raha te hanana konteks feno ianao. Manampia fampidirina manokana amin'ny API misokatra an'ny Front.
Endri-javatra manan-danja eo anoloana
Inboxes an'ny ekipa - Mamela anao handamina ny boatin-tsoratry ny ekipa varotrao amin'ny alàlan'ny fantsona, ambaratonga, jeografia, fahamehana - na izany aza, mandamina ny vinavinanao ianao, ny Front dia mahavita azy.
Valiny feno voa - Mandrosoa hatrany ny tongotrao tsara indrindra miaraka amina modely mailaka voavonjy azo nohavaozina tsara ho an'ny taha ambony.
Drafitra zaraina - Drafitra sy amboary mailaka miaraka amin'ny fotoana tena izy handavorariana ny fanatrehanao ary hialana amin'ny fikorontanana momba ny drafitra.
fanehoan-kevitra - Miresaha haingana amin'ny ekipanao amin'ny sehatry ny mailaka ho an'ny prospect tsirairay hifanaraka amin'ny paikadinao alohan'ny hanatonana.
Matory - Mifantoha amin'ny fifanarahana sarobidy indrindra nefa aza mandatsaka ny baolina amin'ny fanaraha-maso.
Fidirana CRM - Midira amin'ny CRM eo akaikin'ny hafatra rehetra.
Mangataha Demo aloha
Tags: mailaka analyticsfanendrena mailakamailaka fanehoan-kevitrafrontappmailaka nozarainakaonty mailaka nozarainainbox nozaraina
Fikarohana karama: Dingana 10 handresena ny fiovam-po isan-tsindry